भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलता व्यवहारमा देखाएका छौं - धवल शम्सेर राणासंगको अन्र्तवार्ता - Arthapage
प्रकाशित मितिः ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार २०:०० October 16, 2020
डा. धवल शम्शेर राणा बाँकेको नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ । २०५४ सालमा पनि नेपालगञ्ज नगरपालिकाका प्रमुख हुनुभएका राणालाई दुई दशकपछि नगरबासीले फेरी उप–महानगरपालिकाको नेतृत्व सुम्पिनुभएको तीनवर्ष पुरा भएको छ । अमेरिकाबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्याबारिधी गर्नुभएका डा. राणासँग नेपालगञ्जको समग्र विकास निर्माण लगायतका विषयमा उहाँसँग पत्रकार गोविन्द शर्माले गर्नुभएको वार्ता –
– हाम्रो ५ वर्षे कार्यकाल पुरा हुन १६/१७ महिना मात्रै बाँकी छ । छात्रा कलेज र छात्रा विद्यालयलाई सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसका भवन २/४ महिनामा सम्पन्न भईसक्छन् । ५/६ महिनामा सबै पार्कहरु निर्माण हुन्छन, सबैको सञ्चालन गर्नु छ । अब निर्माण भन्दा पनि व्यवस्थित सञ्चालनमा मेरो ध्यान जानेछ ।
प्रकाशित मितिः ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार २०:०० |
Prevभेरीमा खर्च नभएका वा वेवारिसे नागरिकका लागि इमरर्जेन्सी सेवा निःशुल्क
Nextकोरोनाले कारकाँदोकी १८ वर्षिया किशोरी र भृकुटीनगरका ६१ वर्षिय बृद्धको निधन